AFARTAN BARADHO: SHARAXAAD KALA DUWAN, SAWIR, DABEECADO - BEER CAGAARAN
Afar maalmood - magac guud oo loogu talagalay dhowr noocyo hore oo hore, oo la siiyay goosashada horaantii maalinta 40aad ka dib markii la beero.
Noocyada kala duwan ayaa ka duwan dhalid wanaagsan, laakiin dhadhanka digriiga dhallinyaradu wuu ka iftiimaa marka la barbardhigo.
Kala duwan ee baradho sharaxaad Sorokodnevka
digriiga cabbirka dhexdhexaadka ah, oo miisaamaya 80 illaa 120 g;
diirka waa dhuuban, si siman midabkiisu u siman yahay, siman ama yar yar;
midabka maqaarku waa iftiin, laga bilaabo cadaan ilaa cagaar ama casaan;
indhahoodu yar yahay, gacmo aan toosnayn;
saxarka ku yaala gooyuhu waa creamy ama cirro huruud ah;
contentchest waa dhexdhexaad, inta u dhaxaysa 11 ilaa 15%;
maadada sare ee borotiinka, asiidhyada qaaliga ah ee qiimaha leh, carotene beta.
Potato Sorokodnevka - magac caadi ah ee noocyo hore oo hore.
Inta badan magaca hoostiisa ayaa u muuqda noocyada xulashada qarankakuwaas oo aad u adag in lagu aqoonsado diiwaangelinta Gobolka.
Baradhadu waxay ku haboontahay in ay sii kordhaan beeraha yaryar iyo beeraha guriga, waxsoosaarka warshadaha aan loo isticmaalin.
Noocyada Ultravoltage dulqaadka kala duwan ee cimilada, waxay ku dhajiyaan iftiin khafiif ah oo aan lahayn carrada bacrin ah. Awood u leh in ay u dulqaataan abaarta muddada gaaban.
Gobollada leh jawi diiran, Maalinta Qiyaastii 40 ayaa la beeray 2 ama xitaa 3 jeer sannadkii. Wax soo saarku waa mid wanaagsan, taas oo ku xidhan halbeegga ciidda iyo cimilada 1 hektar oo laga soo qaado 200 ilaa 300 sentar oo baradho ah.
Halabuurka digriiga waa mid aan simanayn, oo ay weheliyaan dalagyo badan oo xididdo ah waxay ka yimaadaan ganaaxyada badeecadda. Digaagga qallafsan waxoogaa yar.
Buundooyinka waa dhexdhexaad ama qiyaas dhexdhexaad ah, oo si caddaalad ah u koraya. Dheecaan ballaaran oo cagaaran, caleemo qiyaas dhexdhexaad ah, cagaar mugdi ah, oo leh geeso yar yar oo jilicsan. Corolla waxay ka kooban tahay ubaxyo badan oo caddaan ah oo degdeg ah. Miraha waa dhif u xiran yihiin.
Maalinta Qodobka 50aad si xun loo kaydiyey, ma qaadan karaan masaafo dheer. Laakiin waa ku fiican tahay iibka. Digriiga hore ee quruxda badan ayaa ku jira dalab fiican waxayna kuu oggolaanayaan inaad si dhakhso ah u garato beergooyska.
Waxaad sidoo kale ku baran kartaa noocyo kale oo baradho ah oo hore loo soo bandhigay boggayaga internetka: Borovichok, Kubanka, Crimean Rose, Krepysh, Feloks, Triumph, Agata, Dutch, Natasha, Red Lady, Scarlet, Uladar, Bullfinch, Rosara, Bullfinch, Scarlett Red, Molly, Luck, Lyubava, Latona.
Bisaylkiisa hore wuxuu ilaaliyaa baradhada cudurrada badan ee xun ee habeenkii. Waxaa si dhif ah u saameeya kansarka baradhada ama qolofka caadiga ah, oo u adkaysta fayrasyada. Dhaqan ahaan aan saameyn ku leh dabaylo goor dambe ee caleemaha iyo digriiga.
Dhadhanka baradho waa wax fiicanlaakiin aan fiicneyn. Maalinta 40aad ma aha mid biyo ah oo aan qallal lahayn, macruufka qafiifka ah ee dhexdhexaad ah uma ogalaan inuu xididada u madoobaado inta lagu jiro goynta iyo karinta.
Karinta waa dhexdhexaad. Isticmaalka ugu wanaagsan ee digriiga waa karinta barandhiga oo la kariyey oo dhan, uumi, walxo, qoto dheer-shiil.
Sawirku wuxuu muujinayaa kala duwanaansho baradho afartan:
Ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn noocyada:
dhadhan wanaagsan oo digriiga;
dulqaadashada abaarta, heerkulka hoose, kuleylka;
universality of digriiga;
Waxyaalaha abuurku ma badna waqti cayiman;
iska caabinta cudurada waaweyn.
In kastoo ay jiraan waxyaabo badan, noocyada kala duwan waxay leeyihiin cillado. La ururiyey digriiga ayaa aad u liitaWaxaa lagu talinayaa in la isticmaalo isla markiiba ka dib markaad qodid. Sababtoo ah maqaarka khafiifka ah, xididada ayaa laga yaabaa inay waxyeeleeyaan marka qodaya, sidaas darteed goosashada waxaa lagu sameeyaa oo keliya gacanta.
Wixii bannaanka u jilicsan badan, su'aasha soo socota: goormaad qorshaynaysaa inaad beerato baradhada? Waxa uu soo galaa gugaCarrabku waa in ay kululaan ilaa 10 digrii, laakiin ha ahaato meel fiican oo qoyaan ah.
Gobollada leh jawi diirran, beerto waxay macquul tahay dhammaadka bisha Maarso, laakiin inta badan digriiga waxaa lagu beeray ku dhawaad ​​bilowga Maajo. Ka dib markii la qodo goosashada ugu horeysay, ciidda waa la furfuray, Bacriminta ayaa lagu dabaqaa, iyo dusha labaad ee digriiga waa la beeray.
Sidaa darteed, sannadkiiba waxaad heli kartaa ilaa 2-3 dalag. Bannaanka u fiirso in la beero labaad, digriiga waa weyn.
Ka hor inta beerto, digriiga waa la jarjaray, la qalajiyey, loola dhaqmo kiciyaha kobaca. Wixii beerto isticmaali baradho dhexdhexaad ah. Qalabka aan santuuqa ahayni ma xaqiijin wax soo saar, dalagyada waaweyn ee xididka ah lama heli karo.
Buundada waxaa lagu beeray masaafada 30-35 cm. Ka hor inta aadan ku beerin daloolka waxaad samaysan kartaa qajaar yar oo qoryo qoryo ah. Inta lagu jiro xilliga beerto, geli 1-2 jeer, sameysid safafar sare.
Waraabinta waraabinta muhiim maahan, ciidda guga waxay haysaa meel ku filan oo qoyaan ah. Bacriminta dhirta uma baahna, quudinta hal mar ayaa ku filan inta aan la dhigin digriiga.
Ka hor inta aan la beeri Karin waa in la go'aamiyo inta baradho loo baahan yahay. Dalagyada rootiga ayaa aad u liita, waxaa lagu talinayaa in ay isla markiiba cunaan ka dib markii la beero. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad keydiso abuurka, inta badan waxay ku xiran tahay diidmada digriiga waxyeelloobay.
Maalinta Qodobka 50aad adkaysi u cudurada badan ee solanaceous. Marar dhif ah ayay ku dhacdaa kansarka baradhada, nematode dahab ah, qolof, ama fayrus.
Kobaca hore uma oggola dhirta inay ku dhacdo dabaysha goor dambe.
Wixii ka hortagga digriiga ka hor beerashada pickled, waxaa lagu talinayaa in la beddelo goobaha beeritaanka sanad walba.
Istaraatijiyadaani ma aha oo kaliya ilaalinta baradhada cudurrada, laakiin sidoo kale waxay si weyn u kordhisaa wax-soosaarka.
Dhalooyinka cusub ee dhalinyaradu waxay soo jiitaan noocyo kala duwan oo cayayaanka ah: aphids, kuwa lamid ah Colorado, caarada caarada, wireworms, cicadas. Daaweynta dhirbaaxada ah, daaweynta diyaarinta ee ciidda iyo digriiga ayaa kaa caawin doona ilaalinta beerto.
Ka hor inta beerto, waxaa muhiim ah in la doorto ciidda hadhaaga dhirta oo noqon karta dhul daaqsimeed dhererka dirxiga cayayaanka.
Marka ay dhacdo dhaawacyo halis ah, buufin leh sunta cayayaanka waa suurtagal. Waxaa lagugula talinayaa in aadan fulin ka dib markii bilowga digaagga ubax.
In dagaalka ka dhanka ah Colorado baradho baradho ayaa caawin doona kiimikada: Aktara, Corado, Regent, Taliyaha, Prestige, Lightning, Tanrek, Apache, Taboo.
Baradhada Sorokodnevka - runtii dhabta ah ee beeraha gaarka loo leeyahay. Barafku si dhakhso ah ayuu u bislaaday, way yar tahay, digriiga waxay leeyihiin dhadhan wanaagsan oo muuqaal qurux badan.
In kastoo la'aanta diiwaangelinta rasmiga ah, noocyada kala duwan ayaa sii wadi doona guusha ay ku guuleeysatay beeraha gaarka loo leeyahay, oo jecel in ay jecel yihiin baradhada hore.